လူမဆန်စွာ ရက်ရက်စက်စက် ခေါင်းအုံးနဲ့ဖိသတ်ခဲ့ပေမယ့် အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ မောင်ကံကောင်း…. – Cele Oscar
လူမဆန်စွာ ရက်ရက်စက်စက် ခေါင်းအုံးနဲ့ဖိသတ်ခဲ့ပေမယ့် အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ မောင်ကံကောင်း….
September 16, 2021 By L YC Knowledge
ပထှေးဖွဈသူက ခေါငျးအုံး နဲ့ ဖိသတျခဲ့ပမေယျ့ အသကျဘေးမှ လှတျမွောကျခဲ့တဲ့ မောငျကံကောငျး ကိုမိုးမခရေ လညျပရဟိတ မိဘမဲ့ကြောငျးဆရာတျောကွီးကမှေးစားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။မောငျကံကောငျး ဆိုတဲ့နာမညျလေးကို ဆရာတျောက အသကျဘေးကလှတျမွောကျခဲ့တဲ့အနေ နဲ့ နာမညျပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
လူရှငျတျောမိုးစကျက ပထှေးဖွဈသူကခေါငျးအုံး နဲ့ ဖိသတျခဲ့ပမေယျ့အသကျဘေး မှ လှတျမွောကျခဲ့တဲ့မောငျကံကောငျးရဲ့အကွောငျးလေးကိုသူရဲ့လူမှုကှနျယကျထကျမှာအလှူလုပျရငျးအခုလို ရေးသားဖျောပွထားပါတယျနျော။
ပထွေးဖြစ်သူက ခေါင်းအုံး နဲ့ ဖိသတ်ခဲ့ပေမယ့် အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ မောင်ကံကောင်း ကိုမိုးမခရေ လည်ပရဟိတ မိဘမဲ့ကျောင်းဆရာတော်ကြီးကမွေးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်ကံကောင်း ဆိုတဲ့နာမည်လေးကို ဆရာတော်က အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့အနေ နဲ့ နာမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လူရွှင်တော်မိုးစက်က ပထွေးဖြစ်သူကခေါင်းအုံး နဲ့ ဖိသတ်ခဲ့ပေမယ့်အသက်ဘေး မှ လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့မောင်ကံကောင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုသူရဲ့လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာအလှူလုပ်ရင်းအခုလို ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်နော်။
တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေးကို အရမ်းလွမ်းတဲ့အကြောင်းရင်ဖွင့် ပြောပြလာတဲ့ အကယ်ဒမီ ထက်ထက်မိုးဦး……